မိခင်များ၏ ကျန်းမာရေးသည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်နှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေဟုဆို - Yangon Media Group
မိခင်များ၏ ကျန်းမာရေးသည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်နှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေဟုဆို
မိခင်များ၏ ကျန်းမာရေးသည် တိုင်း ပြည်၏ အနာဂတ်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေ ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ချမ်း အေးသာစံမြို့နယ် မြစ်ဆိပ်ရေကြောင်းရုံးအနီး ရှိ ကြင်းတော်ယန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် ကျန်းမာရေးအသိပညာ ပေးဟောပြောပွဲနှင့် အလှူငွေများပေးအပ်ပွဲ ၌ အဖွင့်အမှာစကားတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးမိခင်များအနေနှင့် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်သင့်ကြောင်းလည်း ဝန် ကြီးချုပ်က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
”မိခင်တွေ ကျန်းမာမှ ကလေးတွေ ကျန်း မာမှာပါ။ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးမယ့် စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲနေပါပြီ။ မိခင်တွေကို ရက် ပေါင်းတစ်ထောင်အတွင်း ထောက်ပံ့ပေးနေ တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ရေ ရှည်မှာ နိုင်ငံတော်အတွက် အောင်မြင်မယ့် မျိုးစေ့တွေ ချပေးနေတယ်ဆိုတာ မမှားပါဘူး” ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုသည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ကြင်းတော်ယန်ဗုဒ္ဓဘာ သာအမျိုးသမီးများနှင့် ဖူးကျင့်အမျိုးသမီးများ၊ ပရဟိတအသင်းများ၊ စေတနာအလှူရှင်များ က ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး(မန္တလေး)ရှိ မွေးကင်းစကလေးအထူးကြပ်မတ်ဆောင်နှင့် ရင်ခွင်မဲ့ကလေးသူငယ် လျှော့ချရေးနှင့် ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတို့အတွက် တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၄၄၅ဝဝဝဝ တန်ဖိုးရှိ Patient Monitor စက်လေးလုံးနှင့် စုစုပေါင်း အလှူငွေကျပ် ၃၅၂ သိန်းကို ပေးအပ်လှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”အချိုပင်တွေ စိုက်နေတဲ့အတွက် အချို သီးတွေ သီးမှာပါ၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း တစ်ထောင့်တစ် နေရာကနေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အရေး ကြီးပါတယ်။ ပြည်သူကို မျက်နှာမူပြီး ပြည်သူ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှ ပြည်သူ့အကျိုးကို သယ်ပိုးမယ့် အသင်းအဖွဲ့တွေကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ်”ဟု ¤င်း က ဆိုသည်။ အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါက်တာယုယု မေ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးကော်မတီ နာယကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကြင်းတော်ယန်ဗုဒ္ဓဘာ သာအမျိုးသမီးများ၊ ဖူးကျင့်အမျိုးသမီးများ၊ ပရဟိတအသင်းများ၊ စေတနာအလှူရှင်များ နှင့် ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်ဈေးအတွင်း လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး တွေ့ရှိ
ရခိုင်အရေးကို မြန်မာ့အရေးသက်သက် အမြင်ဖြင့် ကြည့်ပါက ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည် မဟုတ်ဟု ဆို
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တရားမဝင် ကား-ရထား လမ်းကူး ၂၀ဝ၀ ကျော် ရှိနေ၊ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း တိုး?
‘ကာရိုက်တာ တစ်ခုကို ရပြီဆိုရင် မလှချင်ဘူး၊၊ ကာရိုက်တာ ပီပြင်ဖို့အတွက်ကိုပဲ ကြိုးစားတယ်’ ခွ??
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင် ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်
လွင်မိုး၊ လူမင်း၊ နေတိုး၊ ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာနှင့် အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်မည့် ‘လူကြီးလ?